Kulankii Beesha caalamka iyo Madaxweyne Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Kulankii Beesha caalamka iyo Madaxweyne Farmaajo
Nuxurka kulankii ku dhex maray xarunta Villa Somalia madaxweyne Farmaajo iyo Beesha caalamka ayaa lagu sheegay laba qodob oo aad muhiim u ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Inkastoo Warbaahinta ku hadasha Afka dowladda ay sheegeen in madaxweynaha uu uga warbixiyay dar-dar gelinta howlaha doorashooyinka, loogana mahad celiyay shaqada hufan ee uu qabtay, ayaa waxaa soo baxaya nuxurka wada-hadalladii beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo oo intaa ka weynaa in uu uqabsoomo.
Wakiilka ergayga gaarka ah ee xoghayaha guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa shaaciyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee maanta looga hadlay shirkii ku dhexmaray beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo xarunta dowladda federaalka Soomaaliya ee Villa Somalia.
Wakiilka ayaa sheegay in laba qodob oo muhiim ah looga hadlay kulanka, wuxuu shegay:
Taageerada dheer ee ay u hayaan beesha caalamka dowladda Soomaaliya iyo dadkeedaba, iyo
In la xalliyo cakirnaanta ka taagan weli doorashooyinka Soomaaliya oo buuq badan uu hareeyay.
Ma jiro war murtiyeed kasoo baxay shirka soo dhammaaday ee labada dhinac ku dhexmaray Villa Somalia, balse waxay u badan tahay in lasoo saari doono nuqul kamida warmurtiyeedka, Keydmedia Online waxay idinla wadaagi doontaa macluumaadka kulankaasi la xiriira, markii aan helno xogo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan shirka soo gabagaboobay ee labada dhinac ku dhex maray Villa Somalia.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya Marwo Fowsiyo Abiikar ayaa soo jeedisay in dalka lagu soo rogo xayiraad.
Rooble oo la kulmaya Musharixiinta Mucaaradka
Warar 1 March 2021 8:54